Ahoana ny fomba fampiasana Recipe trenbololone mba hanamboarana mofomamy fanosehana vatolônôna 2019
/Blog/Gallery/Ahoana ny fomba fampiasana Recipe trenbololone mba hanamboarana mofomamy fanosehana vatolônôna 2019
Posted on 05 / 21 / 2019 by Dr. Patrick Young nanoratra tao Gallery.
Inona no atao hoe Trenbolone Enanthate?
Trenbolone E (Trenbolone enanthate) dia iray amin'ireo steroids izay azo sokajina ho toy ny hery fanampiny izay manampy amin'ny masin'ny muscle. Na dia nampiasaina aza izy tamin'ny voalohany fitomboan'ny hozatra Ao amin'ny biby, ny fitadiavan'izy ireo amin'ireo mpandatsa-bolo dia nitombo nandritra ny taona noho ny fahombiazany tamin'ny fitomboan'ny taovam-pisefoana.
Tren E (Trenbolone enanthate) no endriky ny tranbolona efa ela indrindra ary manana tahan'ny fiatrehana maharitra. Noho izany, ny taham-pahavitrihana ankoatry ny vatana dia miadana ihany koa. Manana antsasaky ny vanim-potoana roa ambin'ny folo andro izy io, izay mahatonga azy ho kely kokoa ny tampony. Ny antsasaky ny androm-piainana kosa, dia manampy amin'ny fanatanterahana ny asa anabolic kokoa.
Ahoana no Mampiasà tabilao ho an'ny tranbolona mba hanamboarana vovon-draketa tranbolone
Fanangona izay mila fiomanana
100mg / mL Recettescentbolon ezanthate ho an'ny 100mL
10g Vola-bolon-tsindrona Trenbolone (7.5mL)
5mL solika mena
Fikirana sivana 22um
3mL sy 20mL / 60ml syringe miaraka amin'ny fanjaitra 18-21
Taratasy kely vitsivitsy
Dingana ara-dizitaly (+ -0.1 na 0.01)
Trenbolone Enanthate dia mamelabelatra tsikelikely
-Step 1: Manosika ny steroid trenbolone enanthate powder
-Step 2: Ampidiro ny basolon'ny trenbolone, BA, ary BB ao anaty baoritra
-Step 3: Hevero ao anaty rano rano ilay bebaka
-Step 4: Manamboara solika mena
-Step 5: Filetahana
-Step 6: Mametafeta azy ireo amin'ny kapoakany
Dingana 1: Manaova ny steroid trenbolone enanthate vovoka
Ampiasao ny recolta tranbolone enanthate mba hamoronana menaka saron-trondro, ny dingana voalohany raisinao dia ny mandanja ny Trenbolone Enanthate vovoka in a glass beaker. Ataovy azo antoka fa hahatratra ny fahamendrehana marina ianao mandritra ny dingam-pandehanana mba hisorohana ny tsy hanana loatra na kely amin'ny Tren Enanthate.
Dingana 2: Add trenbolone po, BA, ary BB ao anaty baoritra
Ary ampio i Benzyl Benzoate (BB) sy Benzyl Alcohol (BA) ary hampihetsi-po. Ny Trenbolone mena dia manomboka mandoto ny vovony. Raha te hampitombo ny fahaizan'ny fizotran'ny dingana, mandinika ny dingana 3.
Dingana 3: Asio bakteria ao anaty rano fandroana
Ny fanamainana ny mofomamy anaty rano dia mampitombo ny haavon'ny dingana. Ny rano dia tsy tokony hafafana loatra, aoka ho hafana satria ny temperato avo dia mety hitarika amin'ny famokarana.
Dingana 4: Hanampy solika matevina
Ampiasao ny menaka misy menaka mirotsaka ao anatin'ilay menaka ary alamino tsara izany. Ataovy azo antoka fa tsy misy hormona mandeha alohan'ny hidirana amin'ny dingan'ny filtration. Ataovy antoka fa ny faran'ny boribory dia maneho mazava ny vahaolana Trenbolone Enanthate.
Dingana 5: sivana
Ataovy sary an-tsaina ny vahaolana amin'ny angona lehibe na kely kokoa (ity dia averimberina imbetsaka). Amboary ny sivana sy ny fanjaitra amin'ny seranana ary hiditra ao anatin'ilay vovobony tsy mety.
Manosotra ny vahaolana amin'ny alàlan'ny sivana manerantany ao anaty vovobony amin'ny fampiasana tsindry azy. Aza mampiasa tsindry betsaka satria mety hizara ny sivana ny serfes ary mety hiafara amin'ny korontana ianao.
Raha hitanao fa miadana ny fizotran'ny filtration, dia azonao atao ny manova ny filahiran-jiro rehefa manao sivana 40ml
Dingana 6: Hametaka azy ireo amin'ny kapa mipoaka
Raha vantany vao vita ny fizotran'ny filtration dia aforeto ny vahaolana.
Amin'ny famintinana, ny tranokala Trenbolone e dia toy ny voalaza etsy ambony, ny dingana voalohany azonao dia ny mandanja ny vovony Trenbolone Enanthate ao anaty fitaratra verbe ary manampy Benzyl Benzoate sy Benzyl Alcohol (Azonao atao ny mividy vovo-bolon-trondro enanthate an-tserasera amin'ny sasany steroids powder supplier). Ny Trenbolone mena dia manomboka manala ny vovoka, saingy raha te-hanatsara ny dingana ianao, dia azonao atao ny manasitrana ilay baoritra ao anaty rano. Ny rano dia tsy tokony ho mafana loatra fa hafanana fotsiny satria mety hiteraka korontana ny hafanana ambony.
Ampiasao ny menaka misy menaka mirotsaka ao anatin'ilay menaka ary alamino tsara izany. Ataovy azo antoka fa tsy misy hormona mandeha alohan'ny hidirana amin'ny dingan'ny filtration. Ataovy sary an-tsaina ny vahaolana amin'ny angona lehibe na kely kokoa (ity dia averimberina imbetsaka). Amboary ny sivana sy ny fanjaitra amin'ny seranana ary hiditra ao anatin'ilay vovobony tsy mety.
Raha hitanao fa miadana ny fizotran'ny filtration, dia azonao atao ny manova ny filaharan'ny filalaovana isaky ny manao sivana 40ml ianao. Vantany vao vita ny vahaolana.
Trenbolone Enanthate soa
Ireto misy tombony roa an'ny Trenbolone Enanthate izay mitondra eo ambony latabatra rehefa manapa-kevitra ny hampiasa azy.
- Mampitombo haingana ny hozatra izy
- Tsara ny manapaka
-Promote azota fihazonana
- Manoritra ny haavon'ny kortisol ao amin'ny vatana.
-Aid in fatotra
Manolotra fitomboana haingana izy
Ny fampiasana Trenbolone Enanthate dia fomba tena tsara hanampiana anao hahatakatra ny mety ho vitanao raha toa ka maniry mafy ny hahatratra ny fitomboan'ny haingana.
Tsara ho an'ny famotehana
Trenbolone Enanthate dia tsy isalasalana fa tena manampy amin'ny famelana anao hikorapaka raha mitazona ny tazomoka mahatsiravina mandritra ny fotoam-panapahana.
Mampirisika ny fihazonana azota
Tsy toy ny steroïde sasany izay vokatry ny fihazonana ny rano ny tanjaky ny hozatra, ny fitomboan'ny tavybolone Enanthate dia vokatry ny fitomboan'ny azota, izay mitarika ho amin'ny fitomboan'ny hozatra.
Amboary ny kortisol ao amin'ny vatana.
Trenbolone Enanthate dia mametra ny habetsaky ny cortisol vokariny izay mampitombo ny fanarenana sy ny fanasitranana amin'ny famenoana ny fitokisany mandritra ny fanatontosana.
Amin'ny fampiofanana, maro amin'ireo atleta no mampiasa izany ho loharanom-pahefana fa tsy handevon-tsakafo izay mety hitarika ho amin'ny fahazoana mavesatra.
Ao anatin'ny lisitry ny mahery indrindra steroids, Tokony ho iray amin'ny steroids tianao indrindra ny Trenbolone Enanthate. Raha mikasa ny hampiasa azy ianao dia tsy tokony hanahy anao. Azonao atao ny manapa-kevitra ny hamboly azy io na hividy ny tranolnana Trenbolone Enanthate ao anaty aterineto.
Anabolic Steroids sy ny fanaovana azy, Profesora Frank, pejy 1-47
Anabolika ambanin'ny tany, William Llewellyn, Ronny Tober
10 zavatra tsy maintsy fantatrao alohan'ny handraisanao ny DMAA
2019 Ahoana ny fanaovana testosterone enanthate homebrew ao amin'ny dingana 6 DECA Pulver-Ultimate Guide Ahoana no fanaovana Decandrate Nandrolone (Durabolin)
Yohimbine HCL vovoka
Pyridoxal hydrochloride poids